Ngaba undichazela ukubaluleka kokubhalisa injini?
Kukho iinjine zokusesha ezintathu ezisetyenziswa kakhulu apho kufuneka uhambise indawo yakho - iGoogle, iBing, ne-Yahoo. Ukuba iwebhusayithi yakho ivela kwiphepha lokuqala le-SERP yazo zonke ezi injini zosesho, kukuphawu oluhle kuwe olubonisa ukuba indawo yakho ichanekile kwaye ifakwe. Nangona kunjalo, ukuba ayifikanga kufuphi ne-TOP, ithetha ukuba abathengi bakho abanakho ukufumana umthombo wakho webhubhu kwaye ulahlekelwa ngamathuba akho ekuphuculeni ingeniso yakho kwaye uphucule ukuhlonishwa kwegama lakho. Ukuphucula le meko, kufuneka wenze i-website yohlaziyo, uqhube umkhankaso wokuphromotha kwaye uphinde uthumele umthombo wakho wewebhu kwiinjini - ηλεκτρικη οδοντοβουρτσα παιδικη σκρουτζ.
Kutheni ndimele ndihambise indawo yam ukukhangela iinjinjini?
Khawucinge ngeso simo esele ulungiselele indawo yakho kwaye wenza kwakhona indawo yokuhlaziya kwakhona, kodwa iindawo zakho zokubala ziphantsi. Yintoni enokuba sisizathu sayo? Ndiza kukuxelela imfihlakalo ukuba kutheni uneziphumo ezimbi kangaka. Iinjongo zophando azikwazi nje ukuvavanya imizamo yakho ye-SEO njengoko ungenisekisi indawo yakho kwiinkqubo zazo. Ngokuthumela isayithi lakho ukukhangela iinjinjini, usibhaliswe kuwo kwaye unokutsala i-traffic search search. Ngaphezu koko, ufumana ithuba lokubonisa iinjongo zokusesha zonke iiwebhusayithi zakho zokuhlaziywa kunye neenguqu ngokukhawuleza xa uziphumeza. Abanikazi beWebhsayithi banenzuzo ngokuthumela imithombo yabo yewebhu kwiinjini zokukhangela njengoko zinokuphucula izikhundla zabo kunye nokuphakamisa izinga lokuguqulwa.
Indlela yokuqhuba ubhaliso kwiinjini?
Kulula kakhulu ukungenisa indawo yakho kwiGoogle. Kufuneka uhlawule nayiphi na imali okanye ugcwalise iifom zobhaliso ezide. Ukuthumela indawo yakho kwiGoogle, kufuneka uhlele isayithi lakho ngekhonsoli ye-Google Search. Emva koko, kufuneka uhambe kwikhasi lewebhu lewebhu le-URL ukuze uthumele i-URL. Ukugqiba lo msebenzi, kufuneka ufake iwebhusayithi yakho ye-URL kwibhokisi lokukhangela, uqinisekise ukuba ungumntu ngokubeka isheke "andiyena i-robot" kwaye nqakraza "Yongeza i-URL. "Ngaphezu koko, kucetyiswa ukuba ungenise imephu yakho yewebhusayithi ngeGoogle Search Console.
Ungathumela isayithi yakho kwi-Bing ngendlela efanayo naleyo.Ukubhalisa indawo yakho nale nkqubo, kufuneka uhambe kwi-Bing's Toolmaster Tool kwaye ubhalise apho njengomsebenzisi. Ngokukhawuleza xa ufumene ukungena ngemvume, kufuneka ufake i-URL yakho yekhasi lasekhaya kwaye nqakraza kwi-"Submit" iqhosha. Emva kokungenisa inkqubo, kufuneka uqinisekise ubunini bakho besizinda. Ukugqiba inkqubo yokuqinisekisa, kufuneka udibanise inxalenye yekhowudi ye-HTML kwisihloko sesayithi lakho.
Ukususela kutshanje, iMicrosoft inezixhobo zokukhangela zeBing kunye ne-Yahoo. Kuthetha ukuba xa usithumela isayithi lakho kwi-Bing, uya kubonakala kwakhona kwiziphumo zophando ze-Yahoo. Kwixesha elidlulileyo, inkqubo yokuhanjiswa kwe-Yahoo ihlawulwe. Nangona kunjalo, namhlanje le ncwadana ayisekho.